Injection ịkpụzi usoro nke ulo ngwa plastic ngwaahịa
Injection ịkpụzi usoro nke ulo ngwa plastic ngwaahịa
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụfọdụ teknụzụ nhazi plastik ọhụrụ na akụrụngwa ọhụrụ ejirila ọtụtụ ebeịkpụzinke ụlọ ngwa plastic ngwaahịa, dị ka nkenke injection ịkpụzi, ngwa ngwa prototyping technology na lamination injection ịkpụzi technology wdg Ka anyị kwuo banyere atọ injection ịkpụzi Filiks nke plastic ngwaahịa maka ulo ngwa.
1. Nkenke injection ịkpụzi
Nkenkenkeinjection ịkpụzina-eme ka o doo anya na ịdị elu dị elu na nkwughachi n'ihe gbasara nha na ibu.
Igwe na-akpụzi injection na-eji teknụzụ a nwere ike nweta ntụtụ dị elu, nke na-agba ọsọ ọsọ.N'ihi na usoro njikwa ya na-abụkarị oghere oghere ma ọ bụ njikwa aka mechiri emechi, ọ nwere ike nweta njikwa oke nkenke nke usoro ịkpụzi injection.
N'ozuzu, nkenke injection ịkpụzi chọrọ elu nkenke nke ebu.Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ igwe rọba ụlọ nwere ike imepụta igwe na-akpụzi nkenke nkenke na obere obere.
2. Nkà na ụzụ Prototyping ngwa ngwa
Nkà na ụzụ prototyping ngwa ngwa nwere ike nweta obere mmepụta nke akụkụ plastik na-enweghị ebu.
Ugbu a, ka tozuru okèngwa ngwa prototypingUsoro gụnyere ịkpụzi nyocha laser na ịkpụzi fotocuring mmiri mmiri, n'ime nke a na-eji usoro ịkpụzi nyocha laser eme ihe n'ọtụtụ ebe.Ngwa ihe nyocha nke laser bụ isi iyi ọkụ laser, ngwaọrụ nyocha, ngwaọrụ ntụ ntụ na kọmpụta.Usoro a bụ na isi laser nke kọmpụta na-achịkwa na-enyocha ya dị ka akụkụ ụfọdụ siri dị.N'ebe ebe laser na-agafe, a na-ekpo ọkụ micropowder plastik ma gbazee ma jikọta ọnụ.Mgbe nyocha nke ọ bụla, ngwaọrụ micropowder na-efesa obere oyi akwa ntụ ntụ. A na-emepụta ngwaahịa nwere ụdị na nha ya na nyocha ugboro ugboro.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụfọdụ ụlọ ọrụ dị n'ime ụlọ nke nwere ike ịmepụta igwe na-akpụzi laser na micropowders plastik, mana arụmọrụ nke akụrụngwa anaghị akwụsi ike.
3. Laminated injection ịkpụzi teknụzụ
Mgbe ị na-eji teknụzụ na-akpụzi injection lamination, ọ dị mkpa ijikọ ihe nkiri plastik pụrụ iche e biri ebi na ebu tupu ịkpụzi injection, ruo mgbe a na-akpụzi injection.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọchịchọ maka ihe eji eme plastik maka ngwa ụlọ plastik dị ukwuu.Dịka ọmụmaatụ, igwe nju oyi ma ọ bụ igwe na-asa akwa na-akpaghị aka na-achọkarị ihe karịrị 100 ụzọ abụọ nke plastik, ihe mkpuchi ikuku chọrọ ihe karịrị 20 ụzọ abụọ, TV agba chọrọ 50-70 ụzọ abụọ nke plastik.
N'otu oge ahụ, nkà na ụzụ chọrọ maka ihe ọkpụkpụ plastik dị elu, a na-achọkarịkwa usoro nhazi ahụ ka ọ dị mkpụmkpụ dị ka o kwere mee, nke na-akwalite mmepe nke ihe ọkpụkpụ na nkà na ụzụ mmepụta ihe nke oge a.Tụkwasị na nke ahụ, ngwa ụlọ nke ụfọdụ ihe ọkpụkpụ siri ike dị ka ihe ntụtụ na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ na ihe ndị na-agba agba na-eji nwayọọ nwayọọ na-abawanye.
Ka ọ dị ugbu a, plastik ngwa ụlọ na-etolite n'ụzọ dị arọ, modul ahụike na-egosipụta na mbụ, ọnụ ala dị ala aghọwo isiokwu ebighi ebi.